नेपाली अभिनेत्रीहरूको पढाइ कति ? के तपाइलाइ थाह छ – Hamrosandesh.com
नेपाली अभिनेत्रीहरूको पढाइ कति ? के तपाइलाइ थाह छ
कुनै समयमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अभिनेता अभिनेत्रीहरूको पढाएको कमी भन्दै व्यापक आलोचनाहरू भइरहेको हुन्थ्यो । तर अहिले पछिल्लो समयमा चलचित्र क्षेत्रमा धेरै पढेलेखेका नयाँ अभिनेता अभिनेत्रीहरू नेपाली फिल्मी जगमा राम्रो आकर्षण रहेको छ ।
नेपाली सने क्षेत्रमा केही यस्ता अभिनेत्रीहरू पनि रहेका छन् जो पढाइमा पनि उत्तिकै अब्बल रहेका छन् । केही अभिनेत्रीहरू विभिन्न कारणहरूले पढ्न नपाएपनी पनि चलचित्र क्षेत्रमा भने राम्रो सफलता पाइरहेका छन् । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले ८ कक्षा पढेपछी पढ्ने फुर्सद नै पाइनन् । उनी सिने क्षेत्रमा धेरै व्यस्त भइन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सुपर हिट फिल्महरू दिएकी करिश्माले फेरी आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिएकी थिइन् । भर्खरै मात्र एसइइ दिएकी उनले प्लस टु पढ्ने विचार समेत गरेकी छिन् ।
उनले हालै एसइईको परिक्षामा बि प्लस ल्याइ उत्तिर्ण समेत भएकी छिन् । उनले अध्ययनलाई गहनताका साथ लिएको बताउँछिन् । एसइई उत्तिर्ण उनले व्यवस्थापन संकायमा भर्ना गर्ने सोच बनाइसकेकी छिन त्यस्तै अन्य अभिनेत्रीहरुको पढाइ कति छ त ?
वर्षा शिवाकोटीः स्नातक (बिबिए बिआई) रिमा विश्वकर्माः स्नातक (बिए) सञ्जिता लुइटेलः स्नातकोत्तर (एमए) ऋचा शर्माः स्नातकोत्तर (एमए)
केकी अधिकारीः स्नातकोत्तर (एमबिए) बेनिसा हमालः स्नातकोत्तर (एमए) प्रियंका कार्कीः